网站首页 >> 法兰系列
<h1 align="center" style="margin: 10px auto; font-size: 22px; color: rgb(131, 130, 130); font-family: " microsoft="" white-space:="">高温自密封闸阀</h1><p><br/></p>
<p>产品型号：PHFL-DY10<br/>产品特点：适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接<br/></p><p>详细介绍</p><p>产品名称：凸面板式平焊钢制管法兰Ω(PHFL-DY10)</p><p>产品类型：平焊法兰系列</p><p><strong>产品特点概述 :</strong><br/>&nbsp; &nbsp;平焊法兰：适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接。平焊法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量最大，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。&nbsp;<br/>&nbsp; 材质:锻钢、WCB碳钢、不锈钢、316L、316、304L、304、321、铬钼钢、铬钼钒钢、钼二钛材质。&nbsp;<br/>凸面板式平焊钢制管法兰:尺寸表（PN0.25MPa～PN2.5MPa） JB/T81-94<br/>1、本法兰尺寸表整理依据：<br/>1）JB81-59《凸面板式平焊钢制管法兰》<br/>2）GB/T9112－88《钢制管法兰 类型与参数》、GB/T9119－88《平面、突面板式平焊钢制管法兰》<br/>3）夏平编制的《JB81-94平焊钢制管法兰接管重量计算及绘图》程序（源自“化工设备技术论坛”）<br/>执行标准有GB系列(国家标准)、JB系列(机械部)、HG系列(化工部)、ASME B16.5（美标）、BS4504（英标）、DIN（德标）、JIS（日标）、CBM(船标）。</p><p><br/></p>
<p><span style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">产品型号：PN10-PN25</span><br style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal;"/><span style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">产品特点：带径对焊法兰</span><br/></p><p style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal;"><strong>PN16带颈对焊钢制管法兰(mm)</strong></p><table style="width: 358px;"><tbody><tr class="firstRow"><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">公称尺寸DN</p></td><td colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">钢管外径</p><p style="text-align: center;">法兰焊端外径A1</p></td><td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">连接尺寸</p></td><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰厚度C</p></td><td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰颈</p></td><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">坡口宽度b</p></td></tr><tr><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">A</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">B</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰外径D</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓孔中心圆直径L</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">曙栓孔直径L</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓孔数量n(个)</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓Th</p></td><td colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">N</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">S</p><p style="text-align: center;">≧</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">H1</p><p style="text-align: center;">≈</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">R</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">A</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">B</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">17.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1.8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">35</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">15</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">21.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33.7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">115</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">85</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42.4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">140</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">56</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">56</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">110</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">64</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">64</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">57</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">165</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">74</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">74</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">76.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">76</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">185</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">145</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">92</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">92</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">88.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">89</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">160</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">3.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">114.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">108</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">220</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">180</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">131</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">131</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">3.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">52</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">139.7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">133</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">250</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">210</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">156</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">156</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">168.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">159</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">285</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">240</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">184</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">184</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4.5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">219.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">219</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">340</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">295</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">235</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">235</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">62</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">250</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">273</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">273</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">405</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">350</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">292</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">392</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">70</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">300</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">323.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">325</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">460</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">344</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">344</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">78</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">350</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">355.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">377</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">520</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">460</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">390</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">410</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">82</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">406.4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">426</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">580</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">515</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M27</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">445</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">464</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">85</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">450</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">457</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">480</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">640</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">565</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M27</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">490</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">512</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">87</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">500</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">508</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">530</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">715</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">620</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">44</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">548</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">578</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">600</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">610</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">630</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">840</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">725</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">54</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">652</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">670</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">700</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">711</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">720</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">910</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">840</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">39</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">755</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">759</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">800</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">813</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1025</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">950</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">39</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M36×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">855</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">855</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">900</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">914</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">920</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1050</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M36×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">955</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">954</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">110</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1000</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1016</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1255</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1160</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M39×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1058</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1060</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">120</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1219</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1220</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1485</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1380</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M45×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1262</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1260</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12.5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">130</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1422</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1420</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1685</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1590</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M45×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">52</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1465</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1465</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">145</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1600</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1626</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1620</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1930</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M52×4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">58</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1668</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1668</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">35</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">160</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1800</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1829</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2130</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">44</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M52×4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">62</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1870</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1870</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">17.5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">35</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">170</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2000</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2032</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2345</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2230</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M56×4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">66</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2072</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2072</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">180</p></td></tr></tbody></table><p><br/></p>
<p>产品型号：PN10-PN25<br/>产品特点：带颈对焊方形法兰<br/></p><p>详细介绍</p><p><img src="http://www.cnlgbwg.com/uploads/image/20150808/20150808150353_46816.jpg" alt="" data-bd-imgshare-binded="1" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border-width: initial; border-style: none; display: block;"/></p><p><br/></p><p><strong>PN10带颈对焊钢制管法兰(mm)</strong></p><table style="width: 358px;"><tbody><tr class="firstRow"><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">公称尺寸DN</p></td><td colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">钢管外径</p><p style="text-align: center;">法兰焊端外径A1</p></td><td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">连接尺寸</p></td><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰厚度C</p></td><td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰颈</p></td><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">坡口宽度b</p></td></tr><tr><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">A</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">B</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰外径D</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓孔中心圆直径L</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">曙栓孔直径L</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓孔数量n(个)</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓Th</p></td><td colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">N</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">S</p><p style="text-align: center;">≧</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">H1</p><p style="text-align: center;">≈</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">R</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">A</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">B</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">17.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1.8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">35</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">15</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">21.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33.7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">115</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">85</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42.4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">140</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">56</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">56</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">110</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">64</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">64</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">57</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">165</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">74</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">74</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">76.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">76</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">185</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">145</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">92</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">92</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">88.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">89</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">160</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">3.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">114.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">108</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">220</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">180</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">131</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">131</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">3.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">52</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">139.7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">133</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">250</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">210</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">156</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">156</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">168.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">159</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">285</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">240</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">184</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">184</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4.5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">219.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">219</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">340</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">295</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">234</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">234</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">62</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">250</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">273</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">273</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">395</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">350</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">292</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">292</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">68</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">300</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">323.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">325</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">445</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">342</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">342</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">68</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">350</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">355.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">377</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">505</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">460</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">385</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">402</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">68</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">406.4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">426</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">565</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">515</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">440</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">458</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">72</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">450</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">457</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">480</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">615</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">565</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">488</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">510</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">72</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">500</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">508</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">530</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">670</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">620</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">542</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">562</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">600</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">610</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">630</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">780</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">725</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M27</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">642</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">660</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">700</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">711</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">720</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">895</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">840</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M27</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">746</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">755</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">800</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">813</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1015</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">950</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">850</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">855</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">900</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">914</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">920</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1115</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1050</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">34</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">950</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">954</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1000</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1016</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1230</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1160</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">34</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1052</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1054</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1219</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1220</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1455</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1380</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">39</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M36×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1256</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1256</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">11</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">115</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1422</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1420</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1675</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1590</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M39×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1460</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1460</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">120</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1600</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1626</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1620</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1915</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M45×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1666</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1666</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">130</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1800</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1829</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2115</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">44</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M45×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1868</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1866</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">15</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">140</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2000</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2032</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2325</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2230</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M45×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">54</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2072</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2070</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td></tr></tbody></table><p><br/></p>
<p><span style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">产品型号：PN10-PN25</span><br style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal;"/><span style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">产品特点：对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛</span><br/></p><p style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal;"><strong>PN10带颈对焊钢制管法兰(mm)</strong></p><table style="width: 358px;"><tbody><tr class="firstRow"><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">公称尺寸DN</p></td><td colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">钢管外径</p><p style="text-align: center;">法兰焊端外径A1</p></td><td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">连接尺寸</p></td><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰厚度C</p></td><td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰颈</p></td><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">坡口宽度b</p></td></tr><tr><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">A</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">B</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰外径D</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓孔中心圆直径L</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">曙栓孔直径L</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓孔数量n(个)</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓Th</p></td><td colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">N</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">S</p><p style="text-align: center;">≧</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">H1</p><p style="text-align: center;">≈</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">R</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">A</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">B</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">17.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1.8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">35</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">15</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">21.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33.7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">115</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">85</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42.4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">140</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">56</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">56</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">110</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">64</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">64</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">57</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">165</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">74</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">74</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">76.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">76</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">185</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">145</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">92</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">92</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">88.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">89</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">160</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">3.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">114.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">108</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">220</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">180</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">131</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">131</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">3.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">52</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">139.7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">133</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">250</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">210</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">156</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">156</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">168.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">159</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">285</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">240</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">184</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">184</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4.5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">55</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">219.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">219</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">340</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">295</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">234</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">234</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">62</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">250</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">273</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">273</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">395</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">350</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">292</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">292</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">68</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">300</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">323.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">325</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">445</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">342</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">342</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">68</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">350</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">355.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">377</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">505</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">460</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">385</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">402</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">68</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">406.4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">426</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">565</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">515</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">440</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">458</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">72</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">450</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">457</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">480</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">615</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">565</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">488</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">510</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">72</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">500</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">508</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">530</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">670</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">620</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">542</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">562</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">600</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">610</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">630</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">780</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">725</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M27</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">642</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">660</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">700</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">711</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">720</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">895</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">840</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M27</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">746</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">755</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">800</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">813</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1015</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">950</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">850</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">855</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">900</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">914</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">920</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1115</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1050</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">34</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">950</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">954</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1000</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1016</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1230</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1160</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">34</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1052</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1054</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1219</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1220</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1455</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1380</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">39</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M36×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1256</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1256</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">11</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">115</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1422</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1420</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1675</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1590</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M39×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1460</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1460</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">120</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1600</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1626</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1620</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1915</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M45×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1666</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1666</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">130</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1800</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1829</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1820</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2115</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">44</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M45×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1868</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1866</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">15</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">140</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2000</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2032</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2020</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2325</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2230</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M45×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">54</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2072</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2070</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">150</p></td></tr></tbody></table><p><br/></p>
<p><span style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">产品型号：PH10-PN25</span><br/></p><p style="color: rgb(131, 130, 130); font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;, 寰蒋闆呴粦, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal;"><strong>PN25带颈对焊钢制管法兰(mm)</strong></p><table style="width: 358px;"><tbody><tr class="firstRow"><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">公称尺寸DN</p></td><td colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">钢管外径</p><p style="text-align: center;">法兰焊端外径A1</p></td><td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">连接尺寸</p></td><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰厚度C</p></td><td colspan="5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰颈</p></td><td rowspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">坡口宽度b</p></td></tr><tr><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">A</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">B</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">法兰外径D</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓孔中心圆直径L</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">曙栓孔直径L</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓孔数量n(个)</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">螺栓Th</p></td><td colspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">N</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">S</p><p style="text-align: center;">≧</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">H1</p><p style="text-align: center;">≈</p></td><td rowspan="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">R</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">A</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">B</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">17.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">1.8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">35</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">15</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">21.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">95</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">25</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33.7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">115</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">85</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">14</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42.4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">140</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">56</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">56</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">42</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">110</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">64</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">64</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">45</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">50</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">60.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">57</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">165</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">76.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">76</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">185</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">145</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">90</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">2.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">52</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">88.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">89</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">160</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">105</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">3.2</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">58</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">114.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">108</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">235</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">190</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">22</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">134</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">134</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">3.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">65</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">139.7</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">133</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">270</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">220</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">162</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">162</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">68</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">150</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">168.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">159</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">300</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">250</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">28</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">192</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">190</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">4.5</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">75</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">200</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">219.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">219</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">360</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">310</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">26</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M24</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">244</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">244</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">6.3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">80</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">250</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">273</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">273</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">425</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">370</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M27</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">32</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">298</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">298</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">7.1</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">88</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">300</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">323.9</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">325</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">485</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">430</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M27</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">34</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">352</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">352</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">18</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">92</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">350</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">355.6</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">377</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">555</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">490</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M30</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">38</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">398</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">420</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.0</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">100</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">400</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">406.4</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">426</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">620</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">550</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">16</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">40</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">452</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">472</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">110</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">450</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">457</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">480</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">670</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">600</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">46</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">500</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">522</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">8.8</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">110</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">500</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">508</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">530</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">730</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">660</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">36</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M33</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">48</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">558</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">580</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">10</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">125</p></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">600</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">610</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">630</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">845</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">770</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">39</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">M36×3</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">58</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">660</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">680</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">11</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">20</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">12</p></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">125</p></td></tr></tbody></table><p><br/></p>
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; 松套法兰对焊环松套带颈法兰对焊环松套板式法兰平焊环松套板式法兰 板式翻过松套法兰 另外为了满足装置后锁紧的需要 , 有杆部有孔的 , 这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱 . 有的法兰螺栓没螺纹的光杆要做细 , 叫细杆法兰螺栓 . 这种法兰螺栓有利于受变力的联结 . 钢结构上有专用的高强度螺栓 . 头部会做大些 . 尺寸也有变化热镀锌圆钢是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层。</span></p>